Miatrika tondra-drano tsy mbola nisy toy izany i Shina, nisambotra vehivavy roa ho nampiely tsaho ara-pahasalamana ny manampahefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Português, Italiano, English
Tondra-drano tao Ningxiang, Hunan, Shina tamin'ny taona 2017. Sary avy amin'i Huangdan2060 tamin'ny Wikimedia (CC0).
Mpisera WeChat roa tao Shouguang, faritanin'i Shandong no nosamborina tamin'ny 25 aogositra 2018 noho ny fanaparitahana “tsaho” momba ny fihanaky ny aretina eny amin'ny biby fiompy noho ny tondra-drano goavana tao Shandong.
Nahafaty olona 13 raha kely indrindra tao Shouguang ihany ny Rivo-doza Rumbia, izay namely ny faritra avaratra atsinanan'i Shina nanomboka ny 17 aogositra, ary niteraka fahavoazana teo amin'ny 9,2 lavitrisa yuan (1,34 miliara dolara) tao amin'ny faritra, izay anisan'ireo mpamokatra legioma sy kisoa betsaka indrindra ao Shina. Nahafaty kisoa teo amin'ny 250.000 tany Shandong ihany koa ny tondra-drano.
Niady hevitra momba ny tondra-drano sy ny fahavoazana naterak'izany ireo mpikambana ao amin'ny vondrona fandefasan-kafatra an-takonana ao amin'ny sehatra malaza WeChat , rehefa lasa resaka momba ny mety ho fiparitahan'ny aretina ateraky ny rano tondra-drano ny adihevitra. Ny resadresaka, nadika etsy ambany, no nitarika ny fisamborana ireo mpikambana roa tao amin'ny vondrona tamin'ny 25 Aogositra 2018:
A: Niparitaka tany avaratr'i Shouguang ny areti-mifindra.
B: Areti-mifindra inona?
A: Tsy azoko antoka. Vao henoko tany amin'i XXX
B: Tena matotra ve izany?
A: Aza mihinana kisoa sy akoho be loatra.
B: Tsy nandre na inona na inona momba izany aho.
A: Nividy fanadiovana miady amin'ny otrikaretina ny vadiko mba hanadiovana ny trano.
Minitra vitsy taty aoriana, nizara ny hafatr'izy ireo tamin'ny vondrona WeChat iray hafa ny mpikambana iray tao amin'ilay vondrona karajia, mba hiezaka hampitandrina ny hafa ny amin'ny mety hiparitahan'ny aretina.
Tao anatin'ny 15 ora, nosamborina ireo mpiserasera roa ary nogadraina noho ny fanaparitahana “tsaho” – any Shina, izay fampahalalam-baovao rehetra tsy avy amin'ny fantsom-panjakana ofisialy dia azo heverina fa ho tsaho.
Ny polisy ao Shouguang nitatitra tamin'ny sary momba ny fisamborana ireo vehivavy roa noho ny fanaparitahana tsaho momba ny mety ho fisian'ny “areti-mifindra” tao amin'ny vondrona WeChat ny 26 aogositra 2018.
Notaterin'ny polisy Shouguang tao amin'ny kaonty ofisialin'izy ireo Weibo tamin'ny 26 Aogositra tamin'ny 3:37 maraina ny fisamborana, ary nampiditra ny sarin'ireo vehivavy roa mihitsy aza izy ireo, araka ny hita etsy ambony. Maro ny fampahalalam-baovao namerina nitatitra izany. Vetivety dia lasa fikarohana malaza tao amin'ny sehatra media sosialy ny teny hoe “Shouguang”.
Vao haingana i Shina no nanamafy ny fomba fiasany hanakanana ny fanaparitahana “tsaho” amin'ny alalan'ny fampiasana rafitra mivondrona izay mampiasa ny fahaizana artifisialy, tahiry media sosialy ary tatitra avy amin'ny mpiserasera. Ankehitriny, na dia ny fifanakalozan-dresaka manokana momba ny korontana ara-tsosialy sy ny loza voajanahary ao amin'ny vondrona karajia aza dia mety hiteraka tsaho mora foana ary mety handray fepetra avy hatrany amin'ireo “be resaka” ny polisy, tahaka izay hita tany Shouguang.
Niteraka sahotaka antserasera ny fisamborana ireo mpiserasera. Namoaka filazam-baovao momba ny fisamborana tamin'ny 26 Aogositra vaovao androanin'ny ny sehatra media sosialy, ka nahasarika fanehoan-kevitra maherin'ny 1000 izay ny ankamaroany no nanome tsiny ny manampahefanaao Shouguang noho ny fihoara-pahefana nataon-dry zareo.
Nilaza ny sasany fa tsy nanely tsaho ireo mpisera WeChat roa:
Toy ny sangisangy izany. Samy nahazo ny vaovao avy amin'ny loharano hafa izy ireo. Tokony handeha hijery tranonkala ve izy ireo mba hitsidika sy hanamarina ny vaovao alohan'ny hahafahan'izy ireo mampitandrina ny namana sy ny mpianakavy? Lasa mitebiteby be ny olona manoloana ny loza. Mahatsiaro ho azon-tahotra izy ireo. Nizara ny zavatra henony momba ny areti-mifindra tamin'ny namany sy ny fianakaviany izy ireo, inona no fahadisoana nataon'izy ireo?
Tondra-drano nandritra ny andro maro i Shouguang. Amin'ny toetr'andro tahaka izany, raha tao amin'ny faritra aho ary nisy olona nilaza fa misy areti-mandringana, dia tena mino an'io vaovao io aho ary handray fepetra fisorohana. Na ny vaovao aza dia nitatitra fa naka drôna ny manampahefana mba handraraka fanafody amin'ireo faritra tondra-drano ho fisorohana ny pesta. Ratsy ny mampiely tsaho, fa azonao atao ny manazava. Ankehitriny, tsy niraharaha ny fampahafantarana ny olona momba ny toe-draharaha ianareo fa nisambotra olona noho ny fanaparitahana tsaho. Zava-bitan'ny fanjakana ny mampitahotra olona.
Ny hafa naneho ny fahasosorany tamin'ny vazivazy:
Raha afaka mandray fepetra amin'ny tondra-drano toy ny [nataon'izy ireo tamin'ny ‘tsaho’] izy ireo, dia mety ho nahafinaritra izany.
Mety ho tsaho ihany koa ny tondra-drano tao Shouguang!
Tsy misy ny areti-mifindra, fa nivadika mena sy may ny hoditry ny olona; naheno fofona hendy fotsiny ny tanàna ary nosakanana tsy hiditra izy rehetra. Miangavy mitandrema, hosakanana ny vaovao ary tsy ho voatatitra ny toe-javatra tena izy.
Be dia be ny biby fiompy maty ary voaloto ny rano fisotro. Rehefa misotro rano ianao dia marary ary tsy pesta izany?
Tsy fantatrao mihitsy. Misambotra olona izy ireo ary manasazy azy ireo ho an'ny mahasoa azy ireo manokana. Raha tsy misambotra izao ry zareo, dia hipaingotra hiaraka amin'ny fahavalo vahiny izy ireo ary hampiasa vaovao ratsy mba hamily lalana ny fanjakana.
Tsy nanakana ny polisin'i Shouguang tsy hisambotra olom-pirenena voakasika marobe ny tsikera miely patrana antserasera. Tamin'ny 29 Aogositra, mpiserasera roa hafa no voasambotra noho ny faniratsirana ny polisy Shouguang sy Weifang satria nanao fanehoan-kevitra feno hatezerana tamin'ny lahatsoratr'ireo manampahefana roa tao amin'ny Weibo momba ny ezaka nataon'ny polisy hanavotana aina nandritra ny tondra-drano izy ireo.
Namely an'i Shouguang ny tondradranotamin'ny 19 Aogositra ary milaza ny fanadihadiana ara-tantara fa ity no tondra-drano faran'izay mafy hita tao amin'ny faritra nanomboka tamin'ny taona 1974. Vao efatra andro taorian'izay, dia efa nitsikera ireo fanehoankevitra ratsy sy nanivana vaovao ratsy momba ny fahavoazana nateraky ny tondradrano ny fampahalalam-baovao ofisialy. Ankehitriny, rehefa mitady “Shouguang” ao amin'ny Weibo, dia midera ny ezaka fanavotana ataon'ny manampahefana ny ankamaroan'ny vaovao.